ကလိုစေးထူး: 10 Weird Things About Me
မရောက်တာကြာတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို တနေ့က ဟိုဟိုဒီဒီ လိုက်ဖတ်တော့ ဘလော့ဂ်ညီအကို မောင်နှမတွေရဲ့ ပျော်စရာ အစီအစဉ်တခုကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးဆန်းသော၊ တနည်းအားဖြင့် ဂွတီးဂွကျနိုင်သော အချက်(၁၀)ချက်ကို ဖော်ပြပါတဲ့..။ တကယ်တော့ ဒါက ကိုယ့်ငယ်ကျိုး ငယ်နာဖော်တဲ့ ကစားနည်းတမျိုးပေကိုး.။ :D ကျနော့်ကိုလည်း ငယ်ကျိုးငယ်နာတွေ ဖော်ခိုင်းထားကြလေရဲ့။
ကဲ..။ မကြီးမငယ်နဲ့ ကလေးတွေကြားထဲ ၀င်ပေါတယ် ဆိုချင်ဆို..။ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာတွေ အခိုက်အတန့်အဖြစ်ဖြစ် ပြေပျောက်အောင် ဒီကစားနည်းမှာ ပျော်ပျော်ကြီး ၀င်ပေါ (အဲလေ) ၀င်ကစားကြည့်တာပေါ့..။ ကျနော့်ရဲ့ ထူးခြားသော သို့မဟုတ် ဂွကျကျနိုင်သော အချက်တွေကတော့..
(၁) အိမ်သာတက်လျှင် စာအုပ်ကို စိမ်ပြေနပြေဖတ်တတ်ခြင်း။ (မယုံမရှိနဲ့ တကယ်အရသာ ရှိတာဗျ။ ကျနော် ရေးဖူးတဲ့တချို့စာတွေက အိမ်သာတက်ရင်း စာဖတ်ရာကနေ စိတ်ကူးရတယ်။ :D)
(၂) ဘီယာမူးလာလျှင် ကာရာအိုကေ အလွန်ဆိုချင်ခြင်း။ (မြန်မာပြည်မှာတုန်းက မိုက်ခဲဗျ :D)
(၃) မသိမသာကြွားရသည်ကို ၀ါသနာထုံခြင်း။ (ခပ်ရှက်ရှက်နဲ့ ၀န်ခံတာ။ :P)
(၄) သီချင်းမဖွင့်ပေးသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များကို မုန်းတီးခြင်း။ (ရေလည်အမြင်ကပ်တယ်ဗျာ၊ ၀မ်းတီးတူးရှယ်နဲ့ စားပွဲထိုးတွေနဲ့ အော်ဟစ်ဆူညံနေပြီး သီချင်းလေးမှ မဖွင့်ထားရင်..)
(၅) စိတ်တိုလွယ် စိတ်ပြေလွယ်ခြင်း။ (စိတ်အရမ်းတိုရင် ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲမှာ အားရပါးရအော်တတ်တယ်၊ ဒီမှာတော့ မအော်ရဲတော့ဘူး။ ရဲက အရူးမှတ်ပြီးမှာကြောက်လို့.. :D)
(၆) စကားပြောလျှင် လေသံကျယ်လောင်ကျယ်လောင်ဖြင့် အားရပါးရပြောလေ့ ရှိခြင်း။ (ဘယ်လိုမှကို ထိန်းလို့မရတာ၊ မူးလာရင် ပိုဆိုးတယ်။ :D)
(၇) မတ်တပ်ရပ် ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံလျှင် ခြေထောက်ကားယား အမြဲဖြစ်လေ့ရှိခြင်း။ :D
(၈) ရည်းစားစာ အငှားရေးပေးရာတွင် ပြောင်မြောက်ခြင်း။ (အငှားနော်.. ဟဲဟဲ.. :D)
(၉) အိပ်ရာစောစောဝင်ရ၊ စောစောထရ ပျင်းခြင်း။ (အခုတော့ မရတော့ဘူး။ အလုပ်ရှိတဲ့ နေ့ဆိုရင် အတင်းအိပ်နေရတယ် :(.. )
(၁၀) ကိုယ်က လုပ်မည်ဟု ရည်စူးပြီးသော အလုပ်တခုကို ကိုယ်သိပ်ကြည့်မရသောသူက `ဒါလေးလုပ်လိုက် ပါလား´ ဟုပြောလိုက်လျှင် မလုပ်တော့ခြင်း။ (စိတ်ပုပ်တာ နေမယ်.. :D)
ကဲ.. ကျနော်ကလည်း လူသုံးယောက်ကို ဒုက္ခပေး၊ အဲ.. tag လိုက်ပါအုံးမယ်။
(၁) မမေဓာဝီ (အမရေ.. ဟဲဟဲ…)
(၂) ကျော်ဇေယျ (ခ) ၀ိုင် (မှတ်ထားကွ.. အခုမှ အခွင့်သင့်တုန်း ချောက်တွန်းတာ။)
(၃) ညလေး (ဘယ်သူ tag ထားပြီးပြီလဲတော့ မသိ၊ သူ့ကိုလဲ ချောက်တွန်းချင်နေတာ ကြာပြီ။)
ရယ်မောခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့..။
Posted by ကလိုစေးထူး at 7:37 PM
#1. Taw taw myar myar weird post tway lite fat htar tar, toileting nal pat thet tal weirdness tway taw taw myarr kya tar pal. LOL bro lalaparawin pal koee. Eain thar htal mhar reading ko taw taw kyight kya tar pal. Me ka taw, eain thar htal mhar kyar kyar ma nay nine buu, sar fat pyi zan yuu fo so tar way tay, myan myan tat pyi, htwet fo pal kyo sarr tal. LOL (maybthat's my weirdness)
#3. harr dar ka taw ma pyaw khin ka htal ka thi pyi tharr. :P
#6.anarr mhar shi tal lu tway, narr taw taw nyee mal pone pal.
#7. military school ka htwet lar tal pone san nal pot. Tu toe ko taw taw chit mal pone pal. LOL
#8. harr, ok pal byarr! Book htar lite pyi, meatwet kg kg yay pay taw. :D later ko pyaw tar naw. Ku ma lo tay buu. Tann si sount ya mhar kyought lo, kyo book lote htar tar. :P
#10. Inn..akyint pote tat pone myarr...
A good read bro. Tar.
Apr 23, 2007, 7:56:00 PM
၁။ တူတူပဲ...ဖတ်စရာ စာအုပ်ပါမှ အိမ်သာတက်သည်...:D (ဒါပေမဲ့ အကြာကြီးတော့ မတက်တက်ပါ...)
၅။ တူသည်...ပြီးရင် ဘယ်သူမှ မချော့ရဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ပြေသည်...
၆။ ဟီဟီ...ဒါလည်း နည်းနည်း တူသလိုပဲ...
၉။ ပျင်းသော်လည်း ညဉ့်နက်မှ အိပ်၍ မနက်စောစော ထနေရခြင်း...
၁၀။ ကိုကြီးကမှ ကြည့်မရတဲ့လူ ခိုင်းမှ မလုပ်ပေးတာ ညီမကတော့ စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေရင် ဘယ်သူလုပ်ခိုင်းခိုင်း ဆက်ကို မလုပ်တာ...ဟီဟီ
နောက် ၅ ချက်ကိုတော့ စဉ်းစားလိုက်ပါဦးမည်...
ဤတွင် ပထမဆုံးသော ကွန်မန့် ပြီး၏...:P
Apr 23, 2007, 8:58:00 PM
ကြည့်ရတာ ဗမာတော်၂များ၂ အိမ်သာရဲ့ အနံ့အသက်ကို အတော် တွယ်တာကြတာပဲ ဟဲဟဲ ။
နံပါတ် (၅) မှာ တူတယ်ဗျို့ ။ နောက်စိတ်တိုရင် ပစ္စည်းတွေ မခွဲတော့ဘူး ။ ကိုကလိုစေထူးနဲ့ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးထဲ .. သြော်မေ့လို့... ဘလောဂ့်ဘ၀မှာဆိုတော့ .. ဆီဗုံးထဲ လာအော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ ။ ကိုကလိုစေထူးလည်း ကျွန်မရဲ့ ဆီဗုံးမှာ လာအော်နိုင်ပါတယ် ။ ဖမ်းမယ့်ရဲ မရှိ ။
Apr 24, 2007, 8:16:00 AM
Apr 24, 2007, 4:07:00 PM
နေရာတကာ ငါသိတယ် ငါတတ်တယ် ငါသာဆရာကြီး ငါရောက်ရာနေရာတိုင်း ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကျန်နေခဲ့ပြီ
Apr 24, 2007, 4:11:00 PM
မေဗလပ်စ်..၊ မြန်မာလို ရိုက်ရပျင်းတိုင်း ဘားဘလေ့ရ်ှလိုတွေ ရိုက်တာ မနည်းလိုက်ဖတ်ယူရတယ်။ :D ရည်းစားစာ အငှားရေးခိုင်းရလောက်အောင် မစွံလို့လား။ :P
S0wha1 ပုဒုမ္မာကနေ မျက်စိလည်လာတယ်လား။ :)
ဂျစ်တူး။ အိမ်သာရဲ့ အနံ့အသက်တင် ဘယ်ကမလဲ .. ထိုင်ရတဲ့ အရသာကိုပါ တွယ်တာတာလေ။ :P
အမည်မသိများ.. အရက်ဂျိုးမဟုတ်ပေါင်ဗျာ။ ဘီယာတော့ အသေကြိုက်..
ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ နောက်ဆုံးမှာ ပြန်ချစ်ဖို့ပါဗျာ။ :P
ကွန်မန့်တွေ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးဗျို့။
Apr 24, 2007, 6:55:00 PM
ဦးဦးကလို နောက်ကျသွားပီ ညလေးက တက်ပြီးနေပေါ့၊ ဟိုစိတ်ပုတ်တဲ့ ဦးကြီးရန်အောင်လေ တက်ထားတာ :P
Apr 25, 2007, 7:49:00 AM
အင်တာနက်မရလို့ အွန်လိုင်းမတက်နိုင်တုန်း ကိုသံလွင်က tag ထားတယ်ပေါ့လေ။
ဟိုဘက်မှာ ကိုရန်အောင်ကလည်း tag ထားသေးတယ်။
၂ယောက် tag တဲ့အတွက် ကျေသွားပြီလို့ပဲ သဘောထား လိုက်တော့မယ်။
တကယ်တော့ မရေးရဲလို့ ဆိုပါတော့။
ကိုယ့်အထုတ်ကိုယ်ဖြေ၊ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်း၊ ငယ်ကျိုးငယ်နာ ဖော်ရမယ့် ကစားနည်း ဆိုတော့ အသက်ကြီးနေပြီမို့ လက်ရှောင် လိုက်ပါရစေတော့ နော်။
မဖြစ်မနေ ရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ အထုတ်ကလေး လှစ်ခနဲ ဖြေပြ၊ ပေါင်ကိုလည်း ခပ်ဖွဖွလေး ထောင်း … အင်း … အဲလိုဆို ကောင်းမလား။ စဉ်းစားပါရစေဦး။
ကိုသံလွင်ရဲ့ ဂွကျကျ အကျင့်တွေဖတ်ပြီး ကိုသံလွင်တယောက်တော့ …
ဘီယာမူးမူးနဲ့ အိမ်သာတက်ရင်း စာတွေဖတ်လိုက် သီချင်းတွေဆိုလိုက်။
လဖက်ရည်ဆိုင်မှာ အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ ကြွားနေတုန်း သီချင်းမဖွင့်လို့ စိတ်တိုပြီး စားပွဲထိုးတွေကို မဲ။
လယ်ကွင်းထဲမှာ ခြေထောက်ကားရားနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေတာကို စာခြောက်ရုပ်နဲ့မှားပြီး အသက်ဝင်သော စာခြောက်ရုပ်လို့ မှတ်တမ်းတင်ခံရ။
ရည်းစားစာရေးပေးပါလို့ ဆိုလာသူက ကိုယ်ကြည့်မရသူဖြစ်နေတော့ ရေးပေးမယ်လုပ်ပြီးမှ မရေးချင်တော့ပေမဲ့ မရေးဘဲလည်း မနေနိုင်လို့ ချောက်တွန်းချင်စိတ်နဲ့ ပြောင်မြောက်စွာ ပေါက်ကရတွေ ရေး။
အဲဒီလိုမျိုးများ ဖြစ်နေမလားလို့ ကျမတွေးကြည့်နေမိတယ်။ :P
Apr 30, 2007, 8:34:00 AM